विद्यालयको गेटमा छिर्नासाथ लाग्थ्यो सबैभन्दा भेदभाव रहित समाज यही हो । सबैले बोक्ने किताब एउटै हुने । सबैले लगाउने पोसाक एकै हुने । डेक्सबेन्च पनि एउटै हुने । सबैभन्दा मज्जाको विषय त त्यो थियो । जसले ...
भोली मज्जाले आराम गरौला भनेर मरिमरी काम गर्ने प्राणीलाई वर्तमानमा मानिस भन्ने गरिन्छ । तर उनीहरुले सोचेको दिन कहिल्यै आउदैन । बरु त्यो दिन आउनु भन्दा अगावै मृत्युले उनीहरुलाई अंगाल्न आइपुग्छ । ज...
झट्ट हेर्दा त सजिलो र साह्रै लोभ अनि माया लाग्दो देखिन्छ । तर भित्र त्यति नै जटिल छ,त्यो प्रहरी हो जो आत्मसम्मानका लागी नभई आफ्नो देश र जनताको स्वाभिमानका लागी र सुशासनको प्रत्याभूति जनतालाई दिलाउन तथ...
नेपालको पश्चिम सिमाना महाकाली नदी हो । महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो । काली (कुुटीयांक्ति) नदी लिम्पियाधुराबाटै बगेर आउँछ भन्ने कुरामा कुनै भ्रम छैन । नेपालसँग भएका सन्धि सम्झौता, ऐतिहासिक नक्सा...
भन्न सकिन्छ- एक्लो हुनु सृजनशील हुनु हो, रचनात्मक हुनु हो । भनिरहेकै छौँ - एक्लो हुनु भनेको तपस्वी हुनु हो, ईश्वरको नजिक पुग्नु हो । स्विकार्दछु- धमिलो तलाउ एक्लिएर नै सङ्लिएको हो, नौलाख ताराबिच...
अहिले नेकपाले कास्कीको क्षेत्र नम्बर दुईका लागि जीवन र जगत, पदार्थ र चेतना, प्रकृति र समाजको अन्तरसम्बन्ध बुझेर राजनीति र समाजका बारेमा बहस गर्न सक्ने विश्व विद्यालयको अध्यापकलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको...
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकार पदमा बहाल रहेकै बेला एयर डाइनेष्टी हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि वि स २०७५ फागुन १५ गते उनी सहित ७ जनाको ताप्लेजुङमा उनको निधन भयो । उक्त अकल्पनीय, अप्...
शनिवारको दिन । अफिसको बिदा । काठमाडौको खाल्डोबाट बाहिर जाने निधो गरियो । मेरा अत्यन्तै हितैसी लक्षेन्द्र सिंह र म बनेपा जाने योजना बनायौं। नयाँ ठाउँ घुम्न पाएकोमा हामी निकै खुसी थियौं । दिनभरि घुम्यौ...
आज फूलपाती हो । सहरमा सहर र म छौँ । मलाई चिन्ने र मैले चिन्नेहरू हिजो अस्ति, अझ अस्ति तिर नै गाउँ लागे । मलाई पनि लाग्नुछ । भोलि नभए पर्सि साँझसम्म घर पुग्छु । ममीले हिजो साँझ फोन गरेर भन्नुभयो, -'...
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकार पदमा बहाल रहेकै बेला एयर डाइनेष्टी हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि वि. स. २०७५ फागुन १५ गते उनी सहित ७ जनाको ताप्लेजुङमा उनको निधन भयो । उक्त अकल्पनीय, अप्रत्...
निश्छलता, स्वतन्त्रता, निर्दोषपना, अबोधपना, चंचलता- शब्दकोषकै सुन्दर शब्दहरू हुन् । र, यी शब्दहरू भन्दा निकै सुन्दर हुन्छन्- बच्चाहरू । सभ्यताको उषाकाल हुन् बच्चाहरू । बच्चाहरू युगको गोधुली साँझहरू हु...
अहिले हामी आर्य र मङ्गोल कुलको शक्ति सन्तुलन, पर्यावरण र मानवविधको सम्बन्धसँग जोडिएको तीज/हरितालिका र ऋषि पञ्चमी पर्वको संघारमा छौ । यस्ता पर्वहरू परिवार, निजी सम्पत्तिमा मानिसको स्वामित्व र हिजोका गण...
सामान्यतया नेपालमा १६-४० वर्ष बीचको उमेरवर्गलाई युवावर्गमा परिभाषित गरिएको छ । करिब ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या युवा भएको मुलुकमा युवाको परिभाषा राजनीतिमा लागू भएको पाइदैन । विकसित र विकासशील देशहरूमा युवाला...